Vaovao - Fitaovana hydraulika ho an'ny fampiharana simika
Vehivavy JIC Swivels
Fittings sodina lahy
NPSM Female Pipe Swivels
Voanjo & tanany
O-peratra Face Seal Fittings
OFS Split Flange
R4 hose tsofina Barbs
Split Flange Halves & Kits
Fittings hose hydraulic
55 Series Hose Fittings
56 Series Hose Fittings
71 Series Hose Fittings
73 Series Hose Fittings
78 Series Hose Fittings
91 Series Hose Fittings
ISO 16028 Flat
Manapaka Ring Connection
Fitaovana hydraulika ho an'ny fampiharana simika
Ny tombony amin'ny fahombiazan'ny fanodinana simika
Koa satria miasa mandritra ny famantaranandro ny toeram-pamokarana simika, dia mifandray tsy tapaka amin'ny akora mando, caustic, abrasive ary asidra ny tampon'ny fitaovana. Ho an'ny dingana manokana dia tsy maintsy mahazaka hafanana mafana na mangatsiaka be izy ireo ary mora diovina.
Ny fametahana fantsona vy tsy misy vy ho an'ny fampiharana indostrialy simika dia manome tombony maro. Mafy, mahatohitra harafesina ary madio io fianakaviana io. Miovaova arakaraka ny naoty ny toetran'ny fampisehoana marina, fa ny toetra mahazatra dia ahitana:
• Fisehoan'ny estetika
• Tsy harafesina
• Mahazaka hafanana
• Manohitra afo
• Tsy andriamby, amin'ny naoty manokana
• Azo averina
• Manohitra ny fiantraikany
Ny vy tsy misy vy dia manana votoaty chromium avo lenta, izay mamokatra sarimihetsika oksida tsy hita maso sy manasitrana ny tenany amin'ny lafiny ivelany. Ny tany tsy misy porous dia manakana ny fidiran'ny hamandoana, mampihena ny harafesina sy ny olana amin'ny lavaka. Manala bakteria sy viriosy mampidi-doza ny fampiharana fanadiovana antibacterial tsotra.
Vahaolana fanaraha-maso ranon-javatra mahomby amin'ny fanodinana simika
Hainar Hydraulics dia manamboatra fitaovana sy adaptatera vy mahazatra sy mahazatra ho an'ny fampiharana simika. Manomboka amin'ny fiarovana amin'ny harafesina ka hatramin'ny fitandroana ny fahadiovan'ny haino aman-jery, ny fanangonana vokatra ataontsika dia afaka mandresy ny fanamby rehetra.
• Fitaovana azo ampiasaina indray
• Fittings Barb Hose, na Fittings Push-On
• Fitaovana fitaovana
• Fittings DIN metric
• Tubing Welded
• Fabrication Custom
Ny fitaovana sy adaptatera mahazatra dia tsy safidy tsara indrindra ho an'ny fampiharana rehetra. Mahazoa vahaolana manokana ho an'ny filanao mifehy ny fluid miaraka amin'ny fanampian'ny Hainar Hydraulics.
Ny sampan-draharaham-pamokarana ao an-tranonay dia ahitana mpiasa za-draharaha sy fitaovana machining sy welding efa mandroso. Afaka manamboatra vokatra manokana mifanaraka amin'ny fepetra takiana manokana izy ireo.
Mahafeno ny filana fanaraha-maso ny ranon-javatra indostrialy simika
Ny fitaovana sy ny adaptatera ambany kalitao dia manakana ny fahaiza-manao fanodinana simika. Ny fifandraisana ratsy vita amin'ny milina dia misy lalana mitete, ary mety vaky ny rindrina tsy mifanaraka amin'ny tsindry. Izany no mahatonga ny Hainar Hydraulics. mametraka ny kalitao voalohany. Ny milina CNC anay dia nanapaka kofehy amin'ny fahamendrehana. Ny laharan'ny ampahany, ny laharan'ny andiany, ny laharan'ny andiany, ny kaody fitaka, ary ny karazana traceability hafa rehetra dia azo asiana laser amin'ny vokatra.
Ny entana rehetra amboarinay dia mahafeno ny fenitra ISO 9001: 2015 ho an'ny fametrahana, famokarana ary serivisy. Ny fitaovana dia azo avy amin'ny mpamatsy malaza, ary voamarina ny fanarahan-dalàna rehefa tonga. Ny mpiasan'ny fanaraha-maso ny kalitao dia mampiasa fitaovana fitiliana sy fanaraha-maso marina mba hanamafisana ny vokatra rehetra mihoatra ny fenitry ny indostria na ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ny baiko rehetra dia nozahana ho marina alohan'ny fandefasana.
Ny fittings sy ny adapters dia tonga lafatra amin'ny fampiharana fanodinana simika rehetra. Anisan'izany ny:
• Fitsaboana ranon-javatra
• Famindrana hafanana
• Fizarana vokatra
• Mangatsiaka etona
• Etona sy maina
• Fisarahana faobe
• Fisarahana ara-mekanika
Ny tena ifantohanay dia fitaovana hydraulika ho an'ny fampiharana simika, saingy afaka manamboatra sy mandefa saika fitaovana fanaraha-maso rano izahay. Ny fanisana vy tsy misy vy be dia be dia manome antoka fa manana ny ampahany ilainao ao anaty tahiry izahay ary vonona halefa.
Fotoana fandefasana: May-24-2021
Trano iray, No.39 Longtanshan Road, Ningbo China 315800